AbeNFP bahloniphe umholi okaMagwaza Msibi ngeDumbe - Bayede News
Abaholi baseDumbe uma kugcina kuyibo abathola esobuMeya kuyomele kube ngabantu abanamakhanda alula.
Lolu kwabe kulusuku lomunyu kumalungu kanjalo nobuholi beNational Freedom Party (NFP). Ngalolu suku babe buthelene bonke Olundi enkonzweni yokuzolondoloza omunye wabo. Owayezolondolozwa ngumsunguli kanye nomengameli weqembu uNkk uZanele Veronica Msibi okaMagwaza. Ekhuluma ngalolu suku lomunyu, onguMengameli obambile uMnu uMavundla wathi ngokwabo “iyodwa nje into esiyifunayo, wukukhipha Inkatha lapha kula maHhovisi akhiphwa nguNjinji”.
Lenkulumo yabe ilandela leyo eyashiwo nguNobhala Jikelele weqembu uMnu uCannan Mdletshe ngoNcwaba ekhuluma nelaboHlanga: “Isifundazwe esifuna ukugxila kuso yiKwaZulu-Natal. Sizimisele ngokubuyisa uMkhandlu wethu iZululand okumanje osezandleni zeNkatha Freedom Party(IFP). Siyafuna nokudla umhlanganiso kuMasipala iDumbe kanti sizimisele ngokwenza kahle nakuMasipala uNongoma ngoba nakhona sike sahola” kusho uMdletshe.
Kuthe kuphakama ilanga ngoLwesibili kwabe sekuba sobala ukuthi okwabe kushiwo yilabaholi yize kungaphelele kuyenzeka. Ukwenza kahle kwe-NFP eHlalankosi kwaNongoma kumangaze abaningi kepha abakwenze eDumbe khona bekhipha uKhongolose emandleni kwenze abaningi banesithombe sokaMagwaza Msibi kanjalo nesethembiso sobuholi namalungu.
Zithelana ngodaka seziya kuMaliyethe
Ukubuyela kweNFP eDumbe kungasho ithuba lokukwazi ukuba nesizinda sokuzibonakalisa njengeqembu elisemandleni njengoba kwenza iDemocratic Alliance ( DA) kuMasipala iKapa. Nokho lokhu kuza nengcindezi kanjalo nezinselele. Okokuqala leli qembu beselihambe iminyaka emihlanu yonke komasipala nokuzokwenza liphoqeleke ukuthi lifunde ngokushesha. Ngakolunye uhlangothi kwathi uma izinto zingahambi kahle abanye abaholi bayo abanamava bashabala bayozivulela amanxiwa abanye babuyela lapho babedabuka khona eqenjini Inkatha.
Lokhu kuzosho ukuthi abaholi baseDumbe uma kugcina kuyibo abathola esobuMeya kuyomele kube ngabantu abanamakhanda alula nabazokwazi ukusebenzisana namanye amaqembu njengoba izinkomba zithi kuyomele iDumbe leli libuswe ngokubambisana.
Amehlo athe njo kuNFP ngale kokaMagwaza Msibi obenogazi kubalandeli bakhe nakubavoti jikelele. Ukunyathela kwabaholi abasele kuzolunjaniswa nokunyathela kwakhe esadla anhlamvana.